Jikada & Miiska dushiisa
Qalabka wax lagu cabo
Qalabka Jikada & Qalabka
Ilmaha Muhiimka ah
Caaryada Barafka Silikoon
Cunto & Kaydinta La Laabi Karo
Xirmooyinka Tube & Kubbada Qurxinta
Qaab wareeg ah
ADEEGGA CUSBOONAYSIINTA Alaabada
Waxaan siinaa macaamiisheena tas-hiilaadka wax-ka-beddelka ee galka alaabtayada marka la eego naqshadeynta 3D, cabbirrada, midabada, daabacaadda & textures sida ku cad doorashada macaamiisha, abuurista fikrado cusub, iyo u adeegida baahidooda suuqa Ecommerce.
Waxaan qaadnaa mas'uuliyadda macaamiisheena si aan ugu gaarsiinno alaabada summada gaarka ah sida shuruudaha ay u baahan yihiin annagoo si dhow ula xiriirinayna naqshadeynta badeecada ay u rabaan ganacsigooda, ka dibna u keenaya xaqiiqda anagoo adeegsanayna khibradeena ku saabsan Fikradda Alaabada & Injineerinka, Nakhshadeynta 3D, Naqshadeynta Caaryada, Prototyping & Tijaabinta annaga oo u diraya muunado bilaash ah macaamiisheena ugu dambayntiina u guuraya wax soo saar ballaaran kadib heshiis labada dhinac ah.
1)Fikradda Alaabta: Ururinta fikradaha iyadoo la qaadanayo talooyinka macaamiisha iyo dhammaystirka kooxdayada Injineerinka si aan u abuurno dheellitirka isticmaalka walxaha, mugga alaabta, miisaanka saafiga ah, iyo tixgelinta qodobbada kale ee muhiimka ah ee buuxin kara shuruudaha macaamilka ugu dambeeya.
2)Nakhshadeynta 3D:Nakhshadeynta Alaabta waxaa ka mid ah horumarinta Nakhshad Injineernimo iyadoo la adeegsanayo software-kii CAD/CAM ee ugu dambeeyay iyo macmiilku wuxuu bixiyaa jawaab celin ku saabsan oggolaanshaha ama dib-u-eegista.Waxaan u dhaqaaqnaa naqshadeynta caaryada ka dib markii aan xaqiijin ka helno macaamilka.
3)Nakhshadeynta Caaryada:U dhis caaryada sida ku cad nashqada badeecada 3D ee la ansixiyay ee lagu sameeyay software-ka Injineerinka.
4)Baadhitaanka & Tijaabinta:Soo saarista qaybta adag ee 3D iyadoo la kaashanayo mashiinka CNC iyo tijaabinta naqshadeeda naqshadeynta, fulinta hubinta tayada sifooyinka lagu daray, cabbirka, miisaanka, midabka, iyo sifooyinka kale ee muhiimka ah ee alaabta.
5)Oggolaanshaha Macmiilka:Macmiilku waxa uu oggolaaday muunadda alaabta wax-soo-saarka tirada badan.
6)Wax-soo-saarka guud:Waaxda Wax-soo-saarka ayaa hoggaanka u haysa si ay u soo saarto MOQ-da la doonayo gudaha wakhtiga hoggaaminta wax-soo-saarka ee lagu heshiiyey iyada oo lala kaashanayo macaamilka.
Waxaan bixinaa xalal gaadiid oo kala duwan annagoo si badbaado leh ugu soo rarina alaabada aduunka oo dhan anagoo adeegsanayna habab gaadiid oo kala duwan.Iyada oo ku saleysan waayo-aragnimadayada 10-sano ah, waxaan ku siineynaa taageero heer sare ah oo ku saabsan dhoofintaada iyo baahiyaha silsiladda sahayda.
Xidhiidhkayada lagu kalsoonaan karo ee muddada-dheer ee aan la leenahay gaadiidleyda xamuulka, waayo-aragnimada arrimaha gaarka ah, iyo xidhiidhka tooska ah ee wakiilada dekedaha ayaa keenaya in alaabada si habsami leh loogu raro goobta aad rabto waqti ku habboon, iyada oo aan dhib lahayn, iyo si badbaado leh & ammaan ah.
Gaadiidleyda xamuulka qaada ayaa mas'uul ka ah:
Soo dejinta/Dhoofinta Cadaynta Macmiilka iyo soo gudbinta dukumentiyada lagama maarmaanka ah
Isku-dubbarid la leh khadadka maraakiibta si loogu guulaysto gaarsiinta caalamiga ah ilaa dekedda.
Isku-dubbaridka UPS/FedEx si loogu guulaysto gaarsiinta gudaha ilaa meesha loo socdo.
ADEEGGA U DIYAARSAN EE MARBAABKA
Waxaan bixinaa adeegyo dhoofin ballaaran oo daboolaya maxali ilaa caalami min xirmo ilaa palettes leh xalal rogrogmi kara, la isku halayn karo, iyo dhaqaale oo macaamiisha udub dhexaad u ah.
1) Raritaanka dalabaadka macaamiisha oo ah qaab gaarsiinta baakidh yar (SPD)
2) Palletinging shixnadda culus ee LCL iyo FCL.
3) Isku-dubbaridka adeegyada gaarsiinta maxalliga ah sida UPS iyo FEDEX si loogu keeno waqti-buuxa ah meesha uu macmiilku u socdo.
Jawaab celinta macaamiisha ee alaabta ayaa ah xooggeena.Sidaa darteed, waxaanu hubinaynaa in arrimaha ay la kulmaan macaamiishu aanay khibrad u yeelan badeecada loo soo maray hubinta tayada iyo hubinta dhamaystiran.
Adeegyadayada kormeerku waxay xaqiijinayaan tayada badeecada qaaliga ah, saxnaanta, naqshadaynta, iyo caawinta dhimista khataraha anagoo buuxinayna dhammaan heerarka caalamiga ah iyo waajibaadka.Shaqaalaheena ilaalinta tayada leh ee khibrada leh iyo mashiinada casriga ah ee casriga ah ayaa ka caawiya soo saarista alaab tayo leh.
Waxaan siinaa adeegyo kormeer macaamiisha la tijaabiyay oo la aamini karo.Waxaan bixinaa warbixin tifaftiran oo leh jawaab celin kormeeraha si loo qanciyo macaamiisha.
AQL ( Xadka Cilad weyn: 2.5%, Yar 4%)
Tijaabinta Tuurida Kartoonka
Hubinta Calaamadaha Kartoonka FBA
Xaqiijinta Koodhka Bar
Waxaanu bixinaa adeegyo la xidhiidha sawir-qaadista alaabta oo daboolaya sawirka ugu muhiimsan ee alaabta, utility alaabta, sifooyinka alaabta, cabbirka alaabta, iyo sawirada qaab nololeedka.Waxaan bixinaa xirmo sawir oo dhan liiska Amazon iyo nuxurka A+ oo ay ku jiraan xog-ururin, sawirro 3D, iyo qaab nololeed.Waxaan u keenaynaa hal-abuur macluumaadkaaga A+ iyo liiska sawirada annagoo adeegsanayna khibradayada sawir-qaadista iyo Photoshop-ka si aan u gadano akoonkaaga.
Waa maxay sababta anaga?
Waxaan had iyo jeer tixgelinnaa macaamiishayada mudnaanta koowaad
Waxaan u dulqaadanayn in aan wax u dhimno tayada
Waxaan hubineynaa in khibrada wax iibsiga macaamiishu ay tahay mid u qalanta
Ganacsigeena oo hoos yimaada hal saqaf ayaa ka dhigaya nidaam dhexdhexaad ah oo leh waaxda isku dhafan
Ku qalabaysan mashiino horumarsan oo soo saara qashinka ugu yar
Waxaan bixinaa adeegga iibka ka dib oo hubinaya 100% qanacsanaanta macaamiisha
Khibrad u leh oo u tababaran agabka si loo sameeyo go'aanno caqli-gal ah, oo lagu shaqeeyo wax soo saar sare, bixinta xalal wax ku ool ah oo keena natiijooyin wax ku ool ah oo ku habboon aragtida YONGLI.
No. 33 Nansan Jie, Qiuchang, Huiyang, Huizhou, Guangdong, 516221, Shiinaha
Tani waa YONGLI
Yongli waxaa la aasaasay 2009, soo-saare xirfad leh oo ku takhasusay cilmi-baarista, naqshadeynta, wax-soo-saarka, iyo suuq-geynta alaabta guriga ee alaabada kushiinka balaastikada ah iyo hadiyadaha xayeysiinta.
Alaabooyinka Kulul Khariidadda goobta AMP Mobile